rugare gumbo on News24
ARTICLES RELATING TO RUGARE GUMBO
Cyclone Dineo has killed a child in Mozambique, and Zimbabwe's Joice Mujuru says a group of party leaders she expelled last week were "seeking to turn her into a sex slave".
Top Africa stories: Zim, Africa, Guinea
Zimbabwe's Joice Mujuru has moved to consolidate her position in the crisis-riddled ZimPF party, and an analyst says the AU lacks the new Mbekis, Obasanjos and Bouteflikas to drive it.
Top Africa stories: Zim, Gambia, Somalia
Zimbabwe's pastor Evan Mawarire says he is happy to be out of prison, and Somalia's new leader vows to rebuild failed state.
Former Zimbabwean vice president Joice Mujuru has announced the expulsion of seven of her key allies from her ZimPF political party that she formed following her dismissal from both the ruling Zanu-PF and government.
Zimbabwe opposition parties have called on Zimbabweans to refuse being coerced into donating towards President Robert Mugabe’s 92nd birthday to be held in Masvingo next month, a report says.
President Robert Mugabe is attacking Zimbabwe's judges "out of panic" after realising that he would lose the case in which he is being challenged to nullify the outcome of the ruling Zanu-PF party’s December congress, a former ally says.
Zimbabwean leader Robert Mugabe reportedly says he never wanted to be president - despite the fact that the nonagenarian continues to cling to power, almost 35 years after Zimbabwe attained its independence.
Zimbabwe's president Robert Mugabe has returned home from his annual holiday in the Far East and apologised for extending his stay abroad.
Divided as never before over ageing leader Robert Mugabe’s succession, Zimbabwe’s ruling party is set to open a key leadership congress, with a host of heavyweights sidelined by a major purge.
Zimbabwean Vice President Joice Mujuru says she is taking legal action against pro-government newspapers that accused her of corruption and plotting to topple President Robert Mugabe.
President Robert Mugabe's former deputy, now leader of the opposition Zimbabwe People First, Joice Mujuru, has reportedly accused a group of party leaders she expelled last week of "seeking to turn her into a sex slave".
Zimbabwe opposition leader Joice Mujuru has moved with speed to consolidate her position in the crisis-riddled Zimbabwe People First party after a dramatic fallout with founding members last week.
The newly formed Zimbabwe People First party has claimed that spies from President Robert Mugabe's Zanu-PF have infiltrated its ranks in order to destabilise it from within, a report says.
Zimbabwean President Robert Mugabe who also chairs the SADC and the AU has come under fire over his silence as xenophobic attacks targeting foreign nationals spread from Durban to Johannesburg.
Former Zimbabwean vice president Joice Mujuru has rubbished President Robert Mugabe's claim that she hired the services of Nigerian witchdoctors to try and topple him from power.
Zimbabwe’s state media loyal to First Lady Grace Mugabe has declared that Vice President Joice Mujuru’s faction of the ruling Zanu-PF has been "checkmated" as a party congress begins in Harare.
Former Zanu-PF spokesperson Rugare Gumbo, who was suspended from the ruling party after being accused of conspiring with Vice President Joice Mujuru to topple President Robert Mugabe, says "something strange" is happening in Zanu-PF.